ch 2 Luke – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaLuka / ch 2 Luke
2:1 Ke kaloku ngaloo mihla kwaphuma ummiselo kuKesare Awugusto, ukuze ihlabathi liphela laliza babhaliswe.
2:2 Olo lubhalo lwaba lokuqala; ukuba yenziwa ngumlawuli Syria, ukuba uKireniyo.
2:3 Bonke baya ukuba kuthiwe, ngamnye kwisixeko sakhe.
2:4 Emva koko uYosefu kwakhona wenyuka evela kwelaseGalili, evela kumzi oyiNazarete, waya kwelakwaYuda, emzini kaDavide, ekuthiwa yiBhetelehem, ngenxa yokuba ebengowendlu kaDavide, engowemizalwane yakhe,
2:5 ukuze ukuba kuthiwe, enoMariya, umfazi awayemganile, ngubani ebemithi.
2:6 Ke kwenzeka ukuba, kwathi, xa bakhona, imihla zagqitywa, ukuba wayeza kuzala.
2:7 Kwaye Wamzala unyana wakhe wamazibulo. Waza wamsongela eziqhiyeni, wamlalisa emkhumbini wesitali, ngenxa enokuba babengenandawo kwi yabahambi.
2:8 Kwaye kukho abalusi kwakwelo, ukuphaphe- belinda ebusuku imihlambi yabo.
2:9 kwaye qaphelani, isithunywa seNkosi simi kufuphi nabo, kunye nokuqaqamba kaThixo bababengezelela ngeenxa zonke, kwaye kokubetha kwakhe lawo ngoloyiko olukhulu.
2:10 Wathi ke iNgelosi wathi kubo: "Sukoyika. Kuba, khangela, I mezela uvuyo olukhulu kuwe, oluya kuba kubo bonke abantu.
2:11 Kuba namhlanje uMsindisi uzalelwe ukuba nawe emzini kaDavide: yena uKristu iNkosi.
2:12 Kwaye oku kuya kuba ngumqondiso kuwe: uya kufumana usana lusongelwe eziqhiyeni, lulele emkhumbini wesitali. "
2:13 Kwabakho ngesiquphe, ndawonye nesithunywa eso, inkitha yomkhosi yasezulwini, idumisa uThixo, isithi,
2:14 "Uzuko kuThixo enyangweni, yaye uxolo emhlabeni kubantu bamvakalisa ngokokuzithandela. "
2:15 Kwathi ukuba, xa iingelosi zemkayo kubo zaya ezulwini, abantu abo abalusi bathi omnye komnye, "Makhe siwelele sisiya eBhetelehem apho, siyibone le gama, eye yenzeka, leyo uYehova wazityhila kuthi. "
2:16 Kwaye bahamba ngokukhawuleza. Kwaye ke, bafika kuMariya noJosefu; kwaye usana lulele emkhumbini wesitali.
2:17 ke, xa ebona le, bayakuqonda ilizwi elalithethwe kubo ngaye lo mntwana.
2:18 Kwaye bonke abo bevayo, bamangaliswa yile, yaye ezo zinto zithethiweyo kubo ngabelusi.
2:19 Waye ke uMariya ezigcina zonke ezi mazwi, eziguquguqula entliziyweni yakhe.
2:20 Babuya abalusi, bemzukisa bemdumisa uThixo, ngenxa yazo zonke izinto ababezivile nababezibonile, kanye njengoko kwabe kuthethiwe kubo.
2:21 Baye emveni kweentsuku ezisibhozo yaphela, ukuze lo mfana yaluswe, igama lakhe kuthiwa elinguYesu, kanye njengoko wabizwa isithunywa sezulu engekakhawulwa nokukhawulwa.
2:22 Kwaye emva kweentsuku zokuhlanjululwa kwakhe zazaliseka, ngokomthetho kaMoses, benyuka naye baya eYerusalem, ukuze ukuba bammise phambi kweNkosi,
2:23 kanye njengoko kubhaliwe emthethweni weNkosi, "Kuba yonke into eyindoda evula isizalo iya kubizwa ngokuba ingcwele kuYehova,"
2:24 kwaye ukuze anikele umbingelelo, ngokuvumelana noko kutshiwoyo emthethweni weNkosi, "Iperi amabini asendle okanye amavukuthu amabini."
2:25 kwaye qaphelani, kukho umntu eYerusalem, ogama linguSimon, yaye lo mntu ubelilungisa yaye boyika uThixo, elindele intuthuzelo kaSirayeli. Kwaye uMoya oyiNgcwele waba naye.
2:26 Ke yena wafumana impendulo evela uMoya oyiNgcwele: ukuba akayi kubona kufa kwakhe, engekamboni uKristu weNkosi.
2:27 Yaye wahamba uMoya etempileni. Ke kaloku umntwana uYesu waziswa ngabazali bakhe, ukuze enze egameni lakhe ngokwesiko lomthetho,
2:28 wathabatha naye up, ezingalweni zakhe, akuba esikelele uThixo wathi:
2:29 "Ngoku ke unakho ukubagxotha umkhonzi wakho enoxolo, O Nkosi, ngokwelizwi lakho.
2:30 Ngokuba amehlo am alubonile usindiso lwakho,
2:31 Olulungisileyo ebusweni bazo zonke izizwe:
2:32 ukukhanya sokutyhilela iintlanga Uzuko lwabantu bakho, amaSirayeli. "
2:33 Kwaye uyise nonina zezo phezu kwezi zinto, zithethwayo ngaye.
2:34 USimon wabasikelela, Wathi unina uMariya: "Khangela, le imisiwe ngenxa yokwaphuka kunye nokuvuka kwabaninzi kwaSirayeli, kwaye njengophawu eza aphikise.
2:35 Yaye ikrele liya kucanda umphefumlo wakho, ngokokuze zibe nokutyhilwa izicamango eziphuma ezintliziyweni ezininzi ngokokuze zibe nokutyhilwa. "
2:36 Kwaye kukho umprofetikazi, Anna, intombi kaFanuweli, kwisizwe Ashere. Waye kakhulu ihambile iminyaka, yaye ke ebehleli nendoda iminyaka esixhenxe, ethabathela ebuntombini bakhe.
2:37 Kwaye ngoko yena engumhlolokazi, ukusa kunyaka wakhe asibhozo anesine. Kwaye ngaphandle lemka etempileni, yena umkhonzi ngokuzila nomthandazo, ubusuku nemini.
2:38 Engena kwi lixa, unalo eNkosini. Ke yena wathetha ngaye bonke abalindele ukukhululwa wakwaSirayeli.
2:39 Kwaye emva kokuba bezigqibile zonke izinto ngokomthetho weNkosi, babuyela kwelaseGalili, emzini wabo, Nazareth.
2:40 Ke kaloku wakhula umntwana, yaye yomelezwa kunye inzaliseko kobulumko. Ke ngobabalo lukaThixo ngaphakathi kwakhe.
2:41 Kunye nabazali bakhe baya minyaka yonke eYerusalem, ngexesha elimisiweyo iPasika.
2:42 Ke kaloku waba neminyaka elishumi ubudala, ke wenyuka waya eYerusalem,, ngokwesiko le ngomkhosi.
2:43 Ke kaloku, xa sizigqibileyo iintsuku ezo, xa bebuyela, inkwenkwe uYesu wasalela eYerusalem. Abazali bakhe abazange baqaphele oku.
2:44 kodwa, eba kule nkampani, bahamba uhambo lwemini, abamfunayo phakathi kwezihlobo nezalamane zabo.
2:45 Kwaye akungamfumani, babuyela eYerusalem, abamfunayo.
2:46 Kwathi ukuba, emva kweentsuku ezintathu, bamfumana etempileni, ehleli phakathi koogqirha, ebaphulaphula, ebabuza.
2:47 Ke bonke wamphulaphula nqa phezu ubulumko bakhe kunye neempendulo zayo.
2:48 Kwaye xa embona, babezibuza. Unina wathi kuye: "Unyana, kutheni ukuba wenza ngale ndlela kuthi? Khangela, mna uyihlo bebefuna kuni ndibuhlungu. "
2:49 Wathi ke yena kubo: "Kwenzeka njani na ukuba Benindifunela ntoni? Kuba wena uyazi ukuba kuyimfuneko ukuba nam ukuba ezi zinto kuye uBawo?"
2:50 Ke bona abayiqondanga ilizwi into awayeyithetha kubo.
2:51 Waza wehla nabo yaye baya eNazarete. Kwaye yena mncane kubo. Unina wawagcina onke la mazwi entliziyweni yakhe.
2:52 Waye uYesu ehambela phambili ebulumkweni, kwaye ubudala, kanye nivume, noThixo nabantu.
EyeThupha 13, 2019